"IPirates siyenzela phansi singabadlali" - Ilanga News
Home Ezemidlalo “IPirates siyenzela phansi singabadlali”
“IPirates siyenzela phansi singabadlali”
UHlatshwayo uvuma eyamaphutha, uthi basenethuba lesicoco seligi
Ebika eseCape Town
UMUNWE uwuqondisa kubadlali be-Orlando Pirates ngezinga eliphansi le kilabhu eqale ngalo isizini ka-2021/22 ye-Premier Soccer League (PSL).
UThulani “Tyson” Hlatshwayo (31) oyisitobha sePirates, utshele ILANGA ukuthi bazihlinzela bona ezibini bengabadlali beZi-mnyama ngokwenza amaphutha awubungane aholela ekutheni baphisane ngamagoli alula azitheni.
IPirates selokhu iqalile isizini isanqobe imidlalo emibili, yadlala ngokulingana kwemithathu okwenza ihlale endaweni ka-6 kwi-log ngamaphuzu awu-9. Le kilabhu seyivuzise amagoli awu-6 yahlohla awu-7 oku-khomba ukuthi umdlalo nomdlalo ingenelwa yigoli.
Lesi sitobha esidabuka eSoweto,
eGauteng, besikhuluma naleli phephandaba ngoLwesibili emini emcimbini wabakwa-Adidas obuseCape Town Stadium. Lo mcimbi ubunesiqubulo esithi, kakukho okungenzeki.
“Kumele sizisole thina singabadlali ngokubheda kwezinto ekilabhini, ngokuba buthaka emuva. Kunamagoli asingenele kungafanele. Ngikholwa wukuthi sisengenza kangcono kunangendlela esiqale ngayo.
umdlalo engingathi izitha zazidlala ngaphezulu kwe-thu okwakungenza ukuba sigcine sihluliwe noma sidlale ngokulingana. Empeleni nokukhishwa yiSwallo-ws FC koweMTN8 kwakungafanele kwenzeke.
“Nokho nginalo ithemba lokuthi abaqeqeshi bethu bazokwazi ukusisiza silungise amaphutha esiwenzayo ngokushesha ngoba kawadingeki. Kubalulekile ukulwela ukuqoqa amaphuzu agcwele emidlalweni yeligi ukuzibeka ethubeni lokunqoba isicoco seDStv Premiership. Konke kulele kithina singadlali,” kusho uHlatshwayo.
Lo mdlali ubuye wazwakalisa ukujabula ngezindaba ezithi iPremier Soccer League isemizamweni yokubuyisa abalandeli ezinkundleni ngomdlalo wePirates neKaizer Chiefs ozokuba ngomhla ka-6 kuLwezi (Nove-mber) eFNB Stadium.
Uthi unesifiso sokubukwa ngunina egijima lo mdlalo kwazise esakhula bebewubuka kumabonakude (benonina).
Uthi umama wakhe uyokuba ngo-wokuqala ayo-mtholela ithikithi lalo mdlalo ukuze kufezeke iphupho lakhe.
“Siyabakhumbula abalandeli enkundleni, bawumgogo-dla wekilabhu. Ngiyazi ukuthi abalandeli bayofika namavuvuzela ukuzojabula nabadlali,” kusho lesi sitobha esikhuliswe yi-Ajax Cape Town saze saba ngukaputeni, sadlulela kwiBidvest Wits ngaphambi kokujoyina iBucs.
Previous articleIthemba ngenkinga yokushoda kukagesi ezweni
Next articleUdume kubathandi bebhola ngokubuyela ezinkundleni